Man United-ka Kubadda Cagta - Sheekooyinka Carruurnimada Hore ee Joogtada ah iyo Jiilaalka caadiga ah
Ku soo dhowoow Man United oo ah taariikhda kubada cagta ee caruurnimada dheeraadka ah ee aan la sheegin Xaqiiqooyinka haatan ee Manchester United. Halkan, waxaan soo bandhignay akhristayaasha, guulaha ay gaareen Man United iyo Manchester United oo ah ciyaaryahankii ugu fiicnaa kubada cagta.
Shaki kuma jiro, Red Devils waxay sameysay kubada cagta iyo taageerayaasha ay ku faanaan. Ciyaartoyda haatan iyo kuwa caadiga ah waxay u qalmaan inay ku jiraan taariikhdeena kubadda cagta.
LifeBogger wuxuu u qoondeeyay inuu keeno dhamaan akhristeyaashiisa, xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo iyo xaqiiqooyin ka yimid waqtiyadan xili ciyaareedka kubadda cagta ee kubada cagta ilaa taariikhda. Falanqeyntu waxay ku lug leedahay sheekadooda noloshooda ka hor caan, nolosha qoyska, nolosha xiriirka, muranada iyo waxyaabo badan oo OFF iyo ON-Pitch oo run ah oo aan la aqoon oo ku saabsan iyaga.
Haa, taageerayaasha kubada cagta badankooda wax badan ayey ka aqriyeen awoodooda. Hase yeeshee, wax yar oo keliya ayaa u tixgeliyey qiyamkooda iyo sheekooyinka carruurta oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, Hadda aan adieu dheeraad ah, waxaan soo saarnay muuqaalka our muuqaalka iyo nuxurka aad ee sharafta oo dhan.
Muuji - Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 3, 2020 0
Maqaalkeenu wuxuu bixiyaa daboolis buuxda oo ku saabsan Taariikhda Carruurnimada Dean Henderson, Taariikh nololeedka, Xaqiiqda Qoyska, Waalidiinta, Nolosha Hore, Nolosha Shaqsiyeed, Gabadha saaxiibka ah, Nolosha iyo waxyaabaha kale ee xuska mudan ...
Muuji - Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 24, 2020 0
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada buuxda ee Kubadda Cagta Genius oo loo yaqaan Nickname "Bran". Sheekadeynteena Carruurnimada Brandon Williams oo lagu daray Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold…
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada buuxda ee Halyeeyada Kubbadda cagta oo lagu naaneeso "King". Qormadeena Eric Cantona ee Carruurnimada oo ay weheliso Xaqiiqda Untold Biography Xaqiiqooyinka ayaa ...
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada buuxda ee xirfadda kubbadda cagta ee loo yaqaan "Greenwood". Sheekadeena 'Mason Greenwood' ee Ilmaha oo lagu daray Untold Biography Xaqiiqooyinka la keeno ...
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhameystiran ee kubadda cagta oo leh naanaysta "Spider". Dabeecadeena Wan-Bissaka ee Waalidka Bissaka iyo Wacdiyooyinka aan la Xidhiidhin
LB waxay soo bandhigeysaa sheeko dhamaystiran oo ku saabsan kubadda cagtu iyadoo nambarka "Lampard". Our Bruno Fernandes Sheeko Carqi iyo Tijaabooyin Xogta Laga Qaadanayo ...
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full of Genius Football ah oo si fiican u yaqaan magaca naanaysta "Dan". Dabeecadeena Daanyarka James Childhood Story plus iyo Untold ...
Tifaftirayaasha LifeBogger - Taariikhda wax laga beddelay: Maarso 10, 2019 0
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full of Genius Football kaas oo si fiican u yaqaan naaneeysiga "The Victim Assassin". Ole Gunnar Solskjear Storyhood ...
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Full of Defensive Genius ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'nickname' Iceman. Xogta Waalidka ee Victor Lindelof iyo waraaqaha sawirku waxay kuu keenayaan ...
Tifaftirayaasha LifeBogger - Taariikhda la beddelay: Abriil 15, 2020 1
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Full of Defender kaas oo si fiican loo yaqaan 'nickname' The Beast. Eric Bailly Childhood Story iyo wargeyska sawir qaadaha wuxuu keenaa ...